सैफ अली खानको पहिलो श्रीमती अमृतासंग बिवाह गर्दा करिना यति सानी थिईन, यहि विवाहमा सामेल हुँदा ११ बर्षिया करीनाले शुभकामना दिदै भनेकी थिईन्, “विवाहको बधाइ सैफ अंकल” – Khabar Silo
Posted on March 4, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सैफअली खानले १९९१ मा अभिनेत्री अमृता सिंहसँग विवाह गरे । आफूभन्दा १२ वर्ष जेठी अमृता सिंहसँग उनी २० वर्षका थिए । यो विवाह करिब १३ वर्षसम्म अघि बढेको थियो । यसबिचमा दुबैका दुई सन्तान छोरी सारा अली खान र छोरा इब्राहिम खान भए ।
२००४ मा सैफ र अमृताको सम्बन्धबिच्छेद गरे । दुवै अलग भए। सैफ-करीना कपूरका विवाहको समय सैफले पूर्व पत्नी अमृतालाई एउटा पत्र पठाएका थिए, त्यही पत्रपछि छोरी सारा अली खान विवाहमा आएकी थिइन् ।
सैफअली खानले एक अन्तर्वार्तामा करीनासँग विवाह हुन लागेको कुरा लेखेर आफूले अमृतालाई एउटा पत्र पठाएको बताएका छन् । उनले भने, ‘जब मैले करीनासँग विवाह गर्न गइरहेको थिएँ, मैले अमृतालाई एउटा पत्रमा लेखे यो नयाँ अध्यायको सुरुवात हो।
मैले लेखे हामीबिच एउटा इतिहास रहेको छ र हामी दुवै शुभकामनाको पर्खाइमा छौँ । मैले पत्र पठाउनु भन्दा पहिले करीनालाई पनि देखाए। त्यसपछि पठाए ।
साराले मलाई फोन गरेर भनिन् , ‘म जसरी भए पनि आउँदै थिए, अब म अझ हृदयमा खुसी लिएर आउदैछु।’ मलाई लाग्छ विवाहमा समावेश सबैको दृष्टिकोण यस्तै थियो।
सो समय अमृताले नै सारालाई तयार गरेर पठाएकी थिइन् । सारा अलीले सैफ-करीनाको विवाहको बारेमा भनेकी छन् ‘मेरी आमाले मलाई बुबाको विवाहको लागि तयार गर्नुभयो। करीना वा मेरी आमाले अनौठो महसुस गरेको हुनुपर्छ भन्ने धेरैको विश्वास छ। यद्यपि यो सबै धेरै सहज थियो। सबै जना परिपक्व थिए।’
हालै करीनाले आफ्नो दोस्रो बच्चालाई जन्म दिइन्। यो भन्दा पहिले, उनको एक छोरा तैमूर रहेका छन् ।
सैफ अली खान र अमृता सिंहको प्रेमकथा
बलिउड स्टार सैफ अली खान र अमृता सिंहको प्रेमकथा कुनै फिल्म कहानी भन्दा कम छैन। यी दुईको प्रेम कहानीको बारेमा धेरथोरलाई थाहा भएकै हो । सैफले पहिलो पटक १९९२ मा अमृतालाई भेटे। त्यस समयमा, अमृताले बलिउडमा आफ्नो छाप छोडेकी थिइन र सैफ फिल्म ‘बेखुदी’ बाट डेब्यू गर्न गइरहेका थिए ।
यस बाहेक उनी आफ्नो अफेयरलाई लिएर धेरै चर्चामा भइन्। उनीको नाम सनी देवल, रवि शास्त्री, विनोद खन्ना र सैफ अली खानसँग जोडिएको थियो । सैफ अमृताभन्दा १२ वर्ष कान्छा थिए तर दुबै परिवारको इच्छा बिपरित गएर विवाह गरे। सैफ र अमृताका दुई सन्तान रहेका छन् सारा अली खान र इब्राहिम अली खान।
सैफ र अमृता विवाहितमा करीना पनि पाहुनाको रूपमा त्यहाँ पुगेकी थिइन। त्यतिखेर करीना एकदमै बाल्यवस्थाकी थिइन। सैफको पहिलो विवाह अक्टोबर १९९१ मा भएको थियो , त्यतिबेला उनी ११ वर्षको मात्र थिइन। करीनाले सैफलाई उनको विवाहको लागि बधाई दिएकी थिइन् । करीनाले भनेकी थिइन् “विवाहको बधाइ सैफ अंकल”। तब सैफले जवाफ दिएका थिए, ‘ धन्यवाद छोरी’।
तर अमृता र सैफको सम्बन्ध धेरै तीतोपना पछि समाप्त भयो। २००४ मा, पैसा र सैफको वैवाहिक सम्बन्धपछिको अफेयरका कारण सम्बन्धविच्छेद भएको थियो। केहि समय अघि सैफको एक अन्तर्वार्ता बाहिरिएको थियो । यस अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो र अमृताको सम्बन्धको बारेमा खुलस्त कुरा गरे। साथै आफ्नो असहायता पनि व्यक्त गरे। यो अन्तर्वार्ता वर्ष २००५ को हो। एक वर्ष अघि २००४ मा सैफ र अमृताको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।
अन्तर्वार्तामा सैफले भनेका थिए ‘सम्बन्धविच्छेद पछि म मेरा बच्चाहरूसँग भेट्न पाएको छैन। बारम्बार मलाई मेरो औकात सम्झाइन्छ । मैले नराम्रो व्यवहार र अपहेलनाहरू सहेको छु। सम्बन्धविच्छेद पछि मैले राम्रो महसुस गरिरहेको छु। ‘ सम्बन्ध विच्छेद पछि अमृताले सैफलाई गुजारा नदिएको आरोप लगाइन्।
सैफले भनेका थिए, ‘मैले अमृतालाई ५ करोड दिनु थियो । जसमा मैले २.५ करोड दिएको छु। यस बाहेक, म प्रत्येक महिना छुट्टै १ लाख रूपैयाँ दिदैछु। त्यो पनि छोरा इब्राहिम १८ वर्षको हुँदासम्म। म कुनै शाहरुख खान होइन। मसँग यति धेरै पैसा छैन। ‘
सैफले भने, ‘मैले उनलाई बाँकी रकम पनि दिने वचन दिएँ। म मेरो श्रीमतीलाई आदर गर्दछु। मेरो वालेटमा छोरा इब्राहिमको फोटो छ। म उसको तस्वीर देख्दा रुन्छु। मलाई मेरा बच्चाहरू भेट्न अनुमति छैन। किनभने मेरो जीवनमा एक नयाँ महिला थिइन् जसले आफ्ना आमालाई बच्चाहरूलाई उस्काउन सक्छिन्। ‘
सैफ थप्छन्, ‘आज मेरा बच्चाहरू अमृताका अभिभावक र चाकरहरूसँग बस्दैछन्। अमृता टिभी धारावाहिकमा काम गरिरहेकी छिन्। किन उसले यी सबै गर्नु आवश्यक छ? म आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न सक्षम छु। म तिनीहरूलाई मृत्युसम्म सहयोग गर्नेछु। मैले स्टेज शो, विज्ञापन र फिल्महरूबाट जो कमाएको छु त्यो मैले केवल बच्चाहरूका लागि नै गरेको हु । हाम्रो बंगला अमृता र बच्चाहरूको लागि हो।’
बालपनमा विवाहको बधाइ सैफ अंकल भन्ने करीना अहिले सैफकी श्रीमती बनेकी छन् । केहि बर्ष डेटपछि सैफ र करीनाले १६ अक्टोबर २०१२ मा विवाह गरेका थिए । सैफसँग कयौ पटक भेटेपनि ‘टशन’ को सुटिङले नयँ मोड लिएको थियो । करीनाको सैफसँग प्रेम भयो । उनी पागल समान भएको अ्तर्वार्तामा बताउदै आएकी छन् । करीनाले बताइन् , ‘ हामी राम्रा राम्रा कुरा गर्थ्यौ र हाम्रो राम्रो सम्बन्ध बन्यो । उनि म भन्दा १० बर्ष जेठा छन् । उनका दुई सन्तान पनि छन् । तर उनि मेरा लागि सैफ मात्र हुन् ।’ सैफ करीनाले आफ्नो विवाहित जीवनको आनन्द लिइरहेका छन्।
छोरी भन्दा आमा तरुनी,नायिका साम्राज्ञीकी आमा नेहा यती सुन्दरी छिन की तपाइ हेरेको हेरेकै हुनुहुन्छ (भिडियो हेर्नुहोस)
Posted on July 21, 2020 Author khabar silo
कुनै बेला सदाबहार लोक गायक कुमार बस्नेतले गाएको गीत हिट थियो– छोरी भन्दा आमा तरुणी, लिपिस्टिक पाउडरले !आजभोली यो गीतको सान्दर्भिकता मरेको छैन तर शव्दमा हेरफेर गर्दा उचित हुने देखिन्छ – छोरी भन्दा आमा तरुणी जिम सेन्टरले !शारिरीक व्यायाम स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन, सुन्दर त्वचा राख्नेदेखि पाको उमेर नदेखिनेसम्म हुन्छ । यसले शरिरलाई मेन्टेन […]
छन् गेडी सबै मेरीको तयारीमा ‘छक्का पन्जा’ टिम
शुक्रबारदेखि रिलिज भैरहेको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ले बक्स अफिसमा धुम मच्चाइरहेको छ । चलचित्र हेर्ने दर्शकको संख्यामा कमी आएको छैन । चलचित्रले एक सातामै बक्स अफिसमा लोभलाग्दो आँकडा कमाउनेछ । यसैविच, दिपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, जितु नेपालको टिमले अब कुन चलचित्रमा काम गर्लान् भन्ने कौतुहलता पनि चलचित्र बजारमा हुन थालेको छ । फरक […]
लिड रोल पाउन के के गरेनन् यी कलाकारहरूले
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता चर्चित अभिनेताहरु रहेका छन् जसले सुरुवाती दिनमा धेरै नै संघर्ष गरे । साहिद कपुर, सुशान्त राजपुत, दीपिका पादुकोण जस्ता चर्चित कलाकारहरु फिल्ममा साइड डान्सरको रुपमा काम गर्थे । साहिद कपुर ताल फिल्ममा साइड डान्सरका रुपमा देखिएका थिए । सुशान्त धुम २ मा साइड डान्सरका रुपमा काम गरेका थिए । पछिल्लो […]
करोडौंको घर, सम्पति भएका दम्पतीलाई आफ्नै डा. छोराले सबै सम्पति हडपेर सडकमा पुर्‍याए पछि, आमा भन्छिन्–‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अन्धो हुनुपर्छ’ (भिडिओ)
सुन्दरी माता म्युजिक भिडियो खेल्न काठमाडौँ गईन् , सानै देखिको इच्छा पुरा हुदै… (हेर्नुस् भिडियो)
आज २०७८ सालको पहिलो दिन बैसाख १ गते, यो बर्षको पहिलो दिन आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भारतमा एकैदिन १ लाख ६० हजारभन्दा बढीमा कोरोना
भ्वाइस अफ नेपालका कोच राजु लामाले पत्नि र छोराछोरीलाई कहिल्यै देखाउँदैनन्, कारण यस्तो